Holiday Bonus Card | Isiqondisi Sokuvakasha se-Austria
Imephu yozakwethu wase-Austrian
Izinketho Zokucinga Kwamalungu
Ukudla neziphuzo nokudansa
I-Gold Bonus Partner
Ezemidlalo & Ezokungcebeleka Namasiko
Ukuqashwa Kwezinto Zemidlalo
Izikole Zemidlalo Yasebusika Nasehlobo
ISIQINISEKISO SOKUHAMBELA AMALUNGU EKhadi
Amalungu Amakhadi Owamukelekile, Ozakwethu kanye Nezivakashi.
Silungiselela i-HBC 2.0 ngezici eziningi ezintsha. Isinyathelo esisodwa yile ndawo entsha ekhethekile yeholide lakho e-Austria. Sicela ubuke ividiyo yethu noma usebenzise isayithi lethu eliyinhloko ukuthola eminye imininingwane. Ozakwethu bangabuka uhlu lwabo olwandisiwe endaweni evikelekile yozakwethu.
Holiday Bonus Card - Isiza Esiyinhloko
Holiday Bonus Card ilwela ukukunikeza isipiliyoni sewebhu esingakhathali. Silahle amathuluzi amaningi wokuhlaziya imininingwane yakho ukuze siqinisekise ubumfihlo bakho.
Kodwa-ke, ukusetshenziswa kwamakhukhi yinto esemqoka kakhulu yamawebhusayithi anamuhla. Ngakho-ke, sisebenzisa amakhukhi. Njengenkampani eyazi imidiya, futhi sinamathiselwe amavidiyo kusuka ku-VIMEO naku-YouTube kanye nakuPanoramas avela eMomento360.
Uma uchofoza inkinobho ephelele yesikrini, ixhumeka kwiziphakeli ze-VIMEO, i-YouTube noma i-Momento360. Ngalesi sixhumanisi, sehlulekile ukulawula ngaphezulu kokuqhubeka kokusebenza kwedatha yakho ngamaseva angaphandle. Uma uvuma (sibikezela isivumelwano sakho uma usichitha lesi sikhala), siyakwamukela kuwebhusayithi yethu.
Imininingwane egcwele ngokuvikelwa kwedatha ingatholakala kithi
I-Austria Special - Ikhaya
Abalingani base-Austrian - Imephu
Indawo evikelekile yozakwethu
Holiday Bonus Card - Indawo Eyinhloko
The Holiday Bonus Card I-KG ifisela bonke abahambi isikhathi esihle e-Austria